Kitra any Eoropa : afaka ny sazin’ ny Manchester City | NewsMada
Kitra any Eoropa : afaka ny sazin’ ny Manchester City
Par Taratra sur 14/07/2020
Navoakan’ny tribonaly mi­sa­hana ny ady amin’ny fanatanjahantena (TAS), ny alatsinainy lasa teo, ny didy manafaka ny Manchester City. Afa­ka mandray anjara amin’ny fiadiana ny amboaran’i Eoropa ity klioba anglisy ity. Raha tsiahivina, voaheloka roa ta­ona, tsy afaka mandray anjara amin’ny fifaninanana eoropeanina ny Manchester City, noho izy ireo nanitsakitsaka ny fitsipika ara-bola.
Raha tsiahivina, tsy nahatontosa ny fifanarahana fanohanana ity klioba anglisy ity, ary tsy nahavita fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny fiombonamben’ny baolina kitra ao Eoropa (Uefa) ihany koa, araka ny fanapahan-kevitry ny TAS.
Araka izany, voasazy handoa lamandy 10 tapitrisa Euro, tamin’ny Uefa izy ireo raha tokony ho 30 tapitrisa Euros. Nanda io fanilihana ny Man­ches­ter City io ry zareo Ang­lisy. Nanome aina vao ho an-dry zareo Citizen indray, araka izany, ny fanapahan-kevitry ny TAS, satria manome fatiantoka ara-bola mihoa-pampana ho azy ireo ny tsy fiatrehana lalao eo amin’ny sehatra eoropeanina.